Fadeexad: Dowladda Soomaaliya oo garoonka Joma Kenyatta looga qabtay lacag dhan 1.7 Million oo doller – Somali Top News
Fadeexad: Dowladda Soomaaliya oo garoonka Joma Kenyatta looga qabtay lacag dhan 1.7 Million oo doller
Wargeyska The Star ee ka soo baxa Kenya ayaa ku warramay habeenkii Isniinta in lagu qabtay garoonka diyaaradaha Jomo Kenyatta ee magaalada Nairobi shandad ay ku jirtay lacag gaaraysa 1.7 milyan oo doollarka Marekanka ah (Sh170 milyan) oo ka timid Soomaaliya.
Lacagta waxaa lala xiriiriyay sarkaal sare oo ka tirsan sirdoonka Soomaaliya, wallow aan la magacaabin, balse warbixinta uu wargeyska baahiyay ayaa lagu sheegay lacagta oo la soo mariyay dhanka Itoobiya shaqsiga iska leh inuu xiriir la leeyahay qoyska madaxweynaha Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Dowladda Soomaaliya ilaa hadda ma jirto warbixin ka soo baxday oo looga hadlay lacagta la sheegay in lagu qabtay garoonka diyaaradaha ee Jomo Kenyatta .
Balse, waxay ku soo aaddaysaa xilli Kenya go’aan ka soo baxay maalin ka hor lagu mamnuucay xamuulka ka imaanaya Soomaaliya ee aysan cidna la socon, iyadoo xukuumadda Kenya ay ku goodisay in lala wareegayo dhammaan shixnadaha aan lala socon ee uga imaanaya duulimaadyada Soomaaliya.
Labada dal, waa Kenya iyo Soomaaliya xiisada diblumaasiyadeed ee u dhaxeysa ayaa muddooyinkii u dambeeyay cirka isku shareertay tan iyo markii ay dowladda Soomaaliya ku adkeysatay muranka badda ee labada dal u dhaxeeya in lagu dhammeeyo maxkamadda dambiyada caalamiga ah ee ku taalla The Hague.
Toddobaadyadii u dambeeyay tallaabooyinka ay qaaday Kenya waxaa loo arkayay inay wax u dhimeyso xiriirka, waxay Kenya tirtay heshiiskii duulimaadyada tooska ahaa, waxaa kalo ay dal ku galka u diidday mas’uuliyiinta sare ee dowladda iyadoo dib loo soo celiyay wasiirro iyo xildhibaanno , taa oo jirta ayaan haddana ilaa hadda wax tallaabo ah aysan qaadin dowladda Soomaaliya oo ku cel celisay inay mar walba dhowrayso xiriirka Kenya.
← Dib u milicso wakiilka cusub ee Qaramada Midoobay u soo magacowday Soomaaliya
Xukuumadda Soomaaliya oo u sii hanqal taageysa isdhexgalka Geeska Africa →
Maxaa ku soo kordhay khilaafkii ka taagnaa dowlad deegaanka Soomaalida?
Maamulka Xeraale oo Saanad Militery iyo ciidan ku wareejiyay Ra’isul Wasaare Kheyre+Sawirro
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya oo ka hadlay mooshinka laga keenay Madaxweyne Farmajo